umshini we-alfalfa pellet wokuthengisa.alfalfa pellet yokwenza umshini wamafutha noma okuphakelayo
Amandla:7.5kw,isigaba esisodwa noma izigaba ezintathu
Ikhono:200~ 400kg / h
yini i-alfalfa Futhi kungani ukhetha i-alfalfa?
Alfalfa, wonke umuntu uyazi, idlelo elivame kakhulu emhlabeni. Izici ezibaluleke kakhulu ze-alfalfa ubungqabavu obunamandla nesivinini sokukhula okusheshayo. Kuyamangalisa futhi kukhiqiza kangangokuba kungakhula okungaphezu kwalokho 20 iminyaka futhi kuvunwe ngayo 1-13 izikhathi ngenkathi ngayinye yokukhula. Lezi zinhlamvu zenza kungathandwa kakhulu ukuthi zondliwe, kodwa futhi kwenze kube yisisetshenziswa esihle sokukhiqizwa kwama-biomass pellets. Nge-alfalfa pellet mill, ungakwazi kalula ukusebenzisa ngokugcwele i-alfalfa ukwenza ngokwakho.Inejubane lokukhula okusheshayo futhi ingazivumelanisa kalula nemvelo. Ngakho-ke, isivuno saso siphezulu kakhulu. Lapho isetshenziswa njengokudla kwezilwane, kungaba nomthelela ekudleni okuningi.
Lapho isetshenziswa njengamafutha, kufanele yomiswe, ngoba i-alfalfa emanzi ayishisi kahle futhi iphelele.
Yini ama-Alfalfa Pellets asetshenziselwa ikakhulukazi?
Ama-pellets e-Alfalfa angasetshenziswa ukwengeza amakhalori ekudleni kwehhashi. Bangumthombo omkhulu wama-kilojoule wamahhashi, ngoba baklanyelwe.
Amakhalori asuselwa ku-forage ngeke abangele izinkinga eziningi ezondla ushukela omningi kanye nesitashi, njengoba okusanhlamvu kwenza. Banikeza amakhalori ngaphandle kwe “kuyashisa” isici. Iningi lamahhashi laphaya ngeke lithole “kuyashisa” ku-alfalfa.
Ungayenza kanjani i-alfalfa ibe ngama-pellets?
Umshini we-Alfalfa pellet luhlobo lokugaya lwe-pellet olwenzelwe ngokukhethekile ukwenza ama-alfalfa pellets. Imvamisa pellets ze-alfalfa zisetshenziswa njengokudla kwezinkomo noma komanyolo noma uphethiloli. Kepha kuye kwaqashelwa kabanzi ukuthi nazo zingasetshenziswa njengamapholi wamafutha lapho kuvutha khona.
Lapho uzokwenza pelletize, Isinyathelo sokuqala ukomisa i-alfalfa kuze kufike lapho umswakama ususondele 15%. Indwangu eyomile noma eyomile izothinta ikhwalithi yokugcina yama-alfalfa pellets. Ungaphendukela kwisomisa, ukuze ukwazi ukuthola umswakama ofanele ngokushesha. Noma ungayomile ngokwemvelo.
Isinyathelo sesibili okufanele usenze ukugaya i-alfalfa. Indlela yasekuqaleni ye-alfalfa ayilungile ukuthi umshini we-alfalfa pellet usebenze ngqo. Lapho usigaya ngamapoda amancane, isilinganiso se-pelletizing namazinga we-pellets kuzoba ngcono.
Ngemuva kwalokho isinyathelo esibaluleke kakhulu siyeza. Faka i-alfalfa ku-feeder ye-alfalfa pellet mill, bayocindezelwa kwizimbobo ezinamakholomu ekufeni kanye nokukhishwa emshinini. Ngakho-ke inqubo yonke isiqediwe. Kepha nakekela izinga lokushisa eliphakeme le-biomass pellets. Bazokushisa uma kwenzeka kuthintwa ngqo. Linda umzuzu nje, ke ungabheka eyakho i-alfalfa pellets.
Ipharamitha Yezobuchwepheshe Yomshini we-Alfalfa Pellet
I-VTKLP150 4 100~ 150 320 0.78*0.32*0.75
Ividiyo yomshini we-alfalfa pellet